विनाशकारी भूकम्प गएको ६ बर्ष पूरा भएको छ । २०७२ साल बैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्ला र अन्य केही जिल्लामा समेत गरेर झन्डै ८ लाख घर भत्काएको थियो । ७ सयभन्दा बढी पुरातात्विक संरचनामा क्षति पु¥याएको थियो । सोही बर्ष सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन गरेको थियो ।
पुनर्निर्माणका लागि ५ वर्ष समय पाएको प्राधिकरणको आफ्नो समयसीमा पनि अब सकिँदैछ । गत वर्ष सरकारले प्राधिकरणको कार्यावधि एक वर्ष थप गरेको थियो । आगामी पुस १० मा प्राधिकरणको अवधि समाप्त भएर यो विघटित हुनेछ ।
भूकम्पपछिको यो ६ वर्षको अवधिमा प्राधिकरणले के–कस्ता कामहरु ग¥यो ? के काम हुन सकेनन् ? अनि प्राधिकरण विघटन भएपछि अधुरा कामहरु कसले गर्छ ?
यिनै प्रश्नहरुमा केन्द्रित रहेर पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञवालीसँग रातोपाटीका संवाददाता शम्भु दंगालले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
प्राधिकरणले अहिलेसम्म भूकम्पले भत्काएका कति भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न ग¥यो ? कति बाँकी छन् ?
मूलभूतरुपमा अधिकांश संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गरिसकेको अवस्था छ । अहिले निजी आवासतर्फ सम्पन्न भएका र पुनर्निर्माण हुँदै गरेका तथ्याङ्क हेर्दा ९३ प्रतिशत जनता घर निर्माण सम्पन्न गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
यस्तै, विद्यालयतर्फ ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालय मध्ये ८३ प्रतिशत बराबरको निर्माण सम्पन्न भएको छ । यो आर्थिक बर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने तरिकाले अगाडि बढिरहेका छौँ ।
पुरातात्विक सम्पदातर्फ पनि राम्रो प्रगति भएको छ । ५१ प्रतिशत पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण भइसकेको छ । अहिले ३२ प्रतिशत सम्पदाको काम भइरहेको छ । यसरी हेर्दा पुरातात्विक सम्पदाहरू छिट्टै सकिने अवस्था छ ।
सरकारी भवनतर्फ हामीले एकदमै राम्रो प्रगति हासिल गरेका छौँ । ४१५ सरकारी भवनमध्ये ९१ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ भने अरु बाँकी काम निर्माणको प्रक्रियामा छ ।
सुरक्षा निकायको भवनतर्फ २१६ वटा निर्माण गर्नुपर्नेमा ९८ प्रतिशतको काम सम्पन्न भइसकेको छ । यसरी भौतिक हिसावले पुनर्निर्माणको काम सम्पन्नताको नजिक पुगेको छ ।
यसका साथै गुणात्मक हिसावले पनि सामाजिक आर्थिकरूपमा, प्राविधिक हिसाबमा पनि सफलताको नजिक पुगेका छौँ । पहिला जति पनि ढुङ्गामाटाको प्रविधिबाट घर बनेका थिए अहिले नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर निर्माण सम्पन्न भएको छ । जति पनि घर बनेका छन्, तिनलाई बलियो बनाउने गरी काम भएको छ । सामान्य क्षति पुगेका घरमा पनि रेट्रोफिट गर्ने नयाँ प्रविधि पनि प्रयोग गरिएको छ । जनताको तहमा यो प्रविधि हस्तान्तरण भएको छ । जनतामा सुरक्षित घर बनाउनुपर्छ भन्ने सचेतना माथि गएको पाएका छौँ ।
सबै हिसावले हेर्दा नेपालको पुनर्निर्माण सही दिशामा र उपलब्धीमूलक ढंगले सम्पन्न हुँदैछ ...